बेलायतकी महारानीभन्दा धेरै कमाउने लेखक | Safal Khabar
बेलायतकी महारानीभन्दा धेरै कमाउने लेखक
विहीबार, २९ माघ २०७७, ११ : २६
लन्डन । संसारको सबैभन्दा चर्चित किताबमध्ये पर्ने ‘ह्यारी पोटर’ अहिलेसम्म पाँच सय मिलियन प्रति ब्रिकी भएको छ। ह्यारी पोटरका फिल्म सिरिज र यसकै नामबाट बनेका तीन अम्यूजमेन्ट पार्कले पनि सार्वधिक सफलता कमाइरहेको छ।
कस्मोपोलिटनका अनुसार लेखक जे.के रोलिङको कमाइ बेलायती महारानी एलिजाबेथको भन्दा बढी छ। महारानी एलिजाबेथको कमाइ ५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर छ। त्यसो भए लेखक रोलिङको कमाइ कति छ त ?
सन् २०१९ मा राउलिङका किताब बिक्री ७७ करोड अमेरिकी डलर भएको र ह्यारी पोटर फिल्मले ७७ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाएको बिजनेस इन्साइडरको रिपोर्टले बताएको छ।
ह्यारी पोटरको हरेक किताब र फिल्मबाट आउने कमाइको दश प्रतिशत जे।के रोलिङले पाउने बताइन्छ। यो हिसाबमा उनको कमाइ करिब पन्ध्र करोड अमेरिकी डलर छ। विश्वकै धनी लेखक पनि रहेकी उनको कमाइ स्रोत ह्यारी पोटरका किताब र फिल्म सिरिजमा मात्र सीमित नरहेको कस्मोपोलिटनको भनाइ छ।
फोर्ब्सका अनुसार यी लेखिकाले युनिभर्सल स्टुडियोको विजार्डिङ वर्ल्डबाट पनि आफ्नो आमदानी पाउँछिन्। यसका साथै उनको वेबसाइट ‘पोटरमोर’ले पनि कमाइ गरिरहेको छ। सन् २०१६ मा यो वेबसाइटले १९ लाख अमेरिकी डलर कमाएको रिर्पोटले बताएको छ।
गत वर्ष फोर्ब्सले निकालेको सर्वाधिक कमाइ गर्ने व्यक्तिको सूचीमा रोलिङको कमाइ ६० लाख अमेरिकी डलर थियो। सन् २०१७ मा भने उनको कमाइ ९५ लाख अमेरिकी डलर रह्यो।
यसैगरी, सन् २०२० मा ुसन्डे टाइम्सुले निकालेको धनी व्यक्तिको सूची अनुसार रोलिङको कमाइ सात करोड ९५ लाख यूरो थियो। यो करिब तर यी धनी लेखकले आफू अरबपति रहेको भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेकी छैनन्।
सन् २००५ मा एक अन्तर्वार्ता क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘अहिले मसँग धेरै पैसा छ। मैले सोचेभन्दा पनि धेरै। तर म अरबपति भने होइन।’
कयौं संस्थालाई चन्दा दिएकाले पनि रोलिङ चर्चित छिन्। यसैले गर्दा उनी अरबपतिको सूचीमा पर्न नसकेको अनुमान गरिन्छ।
सन् २०१२ मा उनले करिब एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर चन्दा दिएकी थिइन्।
आठ वर्षीय जोसेफ बने फोर्टनाइटका कान्छा व्यावसायिक खेलाडी
अपराधीलाई फासी दिइनुअघि जल्लादले कानमा भन्छन् केही कुरा, के भन्छन् त जल्लादले ?
नारी दिवसमा श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौडिने प्रतियोगिता..
यस्तो ठाउँ जहाँका महिला जीवनभर मात्र एकपटक नुहाउँछन्
यस्तो देश जहाँ दुई वटा बिहे नगरे हुन्छ कारबाही
एउटा त्यस्तो मेला जहाँ अर्काकी श्रीमती चोर्न पाइन्छ
कर्णाली नदीमा एकै परिवारका दुई जनाको शव भेटियो
दोहोरो सुविधा नलिने प्रमुख आयुक्त राईको घोषणा
अब एमाले–माओवादी अलग अलग
ओली समूहबीच बालुवाटारमा आन्तरिक छलफल जारी
थपिए ८९ जना संक्रमित, ४२ जना निको, एक जनाको मृत्यु
प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी समिति बैठक सुरु, सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि जाने वा नजाने भन्ने निर्णय लिँदै
प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ, प्रचण्ड र माधव नेपालले बुझ्नै सकेनन्
गोपाल किराती प्रचण्ड नेपाल समुहमा आउन बाटो खोज्दै
नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत
नेकपाको आधिकारिकता पायो ऋषि कट्टेलको पार्टीले
मन्त्रीको असली रुप पर्दाफास !
यस्ता छन् सरकार बनाउने चार विकल्प
प्रचण्ड–माधव समूहले गर्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार
सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित : प्रचण्ड
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली